iPhone X ရဲ့ Animojis ကို Android Phone တိုင်းမှာ ဘယ်လို သုံးမလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
0 Shares 2058 Views
Ko Thuya Jul 17, 2018
Apple က iPhone X မှာ Augemted Reality နဲ့ Truedepth Camera နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ Animojis လုပ်ဆောင်ချက်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Animojis ဟာ လူ့မျက်နှာ အမူအရာနဲ့ လှုပ်ရှားမှုအတိုင်း Emoji များက တုပ ပြုမူပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ စွမ်းရည်မြင့် အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများမှာလည်း ဒီလုပ်ဆောင်ချက်မျိုး ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို အန်းဒရွိုက် ဖုန်းတိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် App တစ်ခု ပေါ်လာပါပြီ။
Supermoji ဟာ Android မှာ iPhone X ရဲ့ Animojies လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာလည်း Filters နဲ့ Masks များ ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Apple iPhone X မှာ 3D Recognition System ကို အသုံးပြု၍ Animojis ကို ဖန်တီးထားတဲ့အတွက် Android မှာတော့ Supermoji ဟာ သူ့လောက် စွမ်းရည်မြင့်မားခြင်း မရှိပါဘူး။ Supermoji မှာ Masks နဲ့ Effects များပါတဲ့ Snapchat နဲ့ အခြား Apps များမှာလို Augmented Reality System ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ရလဒ်က အလွန် မကောင်းပေမယ့် ပျော်ရွှင်စေမှာ သေချာပါတယ်။
Supermoji ကို ဖွင့်ရင် Background, Supermoji နဲ့ Effects စတဲ့ Tab ၃ ခု တွေ့ရပါတယ်။ ပထမဆုံး Background Tab မှာ အရောင်နဲ့ နောက်ခံ Pattern ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ခံကို ဖျက်ချင်ရင် ဖျက်နိုင်ပြီး အခြား နှစ်သက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ခုကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
နောက် Tab ကတော့ Supermoji ဖြစ်ပြီး သင်နှစ်သက်တဲ့ Emoji ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ပန်ဒါဝက်ဝံ၊ အုန်းသီး၊ ကြောင်၊ ဂြိုလ်သား၊ ခွေးနဲ့ ကြက်များကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး Tab မှာ မီးတောက်များ ပါးစပ်ကနေ ထွက်လာခြင်း၊ အေးမြတဲ့ ဆောင်းရာသီ၊ မိုးရွာတဲ့ ရာသီတို့လို Effects များကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Supermoji ကို သုံးနေစဉ် အရှေ့နဲ့ အနောက် ကင်မရာများကနေ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ သင်ဖန်တီးထားတဲ့ လှုပ်ရှားသက်ဝင်တဲ့ Emoji များကို သူငယ်ချင်းများထံ မျှဝေခြင်း၊ ဖုန်းတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Supermoji ဟာ Apple Animoji လောက်တော့ စွမ်းဆောင်ရည် မမြင့်မားပေမယ့် အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်များကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ အောက်ပါ လင့်ကနေ သူ့ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
iPhone X ရဲ့ Animojis ကို Android Phone တိုငျးမှာ ဘယျလို သုံးမလဲ ?
Apple က iPhone X မှာ Augemted Reality နဲ့ Truedepth Camera နညျးပညာကို အသုံးပွုထားတဲ့ Animojis လုပျဆောငျခကျြကို မိတျဆကျခဲ့ပါတယျ။ Animojis ဟာ လူ့မကျြနှာ အမူအရာနဲ့ လှုပျရှားမှုအတိုငျး Emoji မြားက တုပ ပွုမူပေးခွငျး ဖွဈပါတယျ။ အခုနောကျပိုငျးမှာ ထုတျလုပျတဲ့ စှမျးရညျမွငျ့ အနျးဒရှိုကျဖုနျးမြားမှာလညျး ဒီလုပျဆောငျခကျြမြိုး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလုပျဆောငျခကျြကို အနျးဒရှိုကျ ဖုနျးတိုငျးမှာ အသုံးပွုနိုငျမယျ့ App တဈခု ပျေါလာပါပွီ။
Supermoji ဟာ Android မှာ iPhone X ရဲ့ Animojies လုပျဆောငျခကျြကို ပံ့ပိုးပေးနိုငျပါတယျ။ သူ့မှာလညျး Filters နဲ့ Masks မြား ပါပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Apple iPhone X မှာ 3D Recognition System ကို အသုံးပွု၍ Animojis ကို ဖနျတီးထားတဲ့အတှကျ Android မှာတော့ Supermoji ဟာ သူ့လောကျ စှမျးရညျမွငျ့မားခွငျး မရှိပါဘူး။ Supermoji မှာ Masks နဲ့ Effects မြားပါတဲ့ Snapchat နဲ့ အခွား Apps မြားမှာလို Augmented Reality System ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ ရလဒျက အလှနျ မကောငျးပမေယျ့ ပြျောရှငျစမှော သခြောပါတယျ။
Supermoji ကို ဖှငျ့ရငျ Background, Supermoji နဲ့ Effects စတဲ့ Tab ၃ ခု တှရေ့ပါတယျ။ ပထမဆုံး Background Tab မှာ အရောငျနဲ့ နောကျခံ Pattern ကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ နောကျခံကို ဖကျြခငျြရငျ ဖကျြနိုငျပွီး အခွား နှဈသကျတဲ့ ဓါတျပုံတဈခုကို ထညျ့သှငျးနိုငျပါတယျ။
နောကျ Tab ကတော့ Supermoji ဖွဈပွီး သငျနှဈသကျတဲ့ Emoji ကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ လကျရှိမှာ ပနျဒါဝကျဝံ၊ အုနျးသီး၊ ကွောငျ၊ ဂွိုလျသား၊ ခှေးနဲ့ ကွကျမြားကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။
နောကျဆုံး Tab မှာ မီးတောကျမြား ပါးစပျကနေ ထှကျလာခွငျး၊ အေးမွတဲ့ ဆောငျးရာသီ၊ မိုးရှာတဲ့ ရာသီတို့လို Effects မြားကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။
Supermoji ကို သုံးနစေဉျ အရှနေဲ့ အနောကျ ကငျမရာမြားကနေ ဓါတျပုံနဲ့ ဗီဒီယိုမြား ရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာ သငျဖနျတီးထားတဲ့ လှုပျရှားသကျဝငျတဲ့ Emoji မြားကို သူငယျခငျြးမြားထံ မြှဝခွေငျး၊ ဖုနျးတှငျ သိမျးဆညျးခွငျးမြားကို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
Supermoji ဟာ Apple Animoji လောကျတော့ စှမျးဆောငျရညျ မမွငျ့မားပမေယျ့ အသုံးပွုရတာ လှယျကူပွီး ပြျောစရာကောငျးတဲ့ အခိုကျအတနျ့မြားကို ပိုငျဆိုငျရမှာပါ။ အောကျပါ လငျ့ကနေ သူ့ကို ရယူနိုငျပါတယျ။